Fomba fitomboana / fanamboarana volo？
Volo maina sy mangatsiatsiaka, rehefa maina ny andro dia maheno ny feon'ny "papapa" static, ratsy tarehy, tsy mahazo aina ary tsy mahafinaritra. Ny volo marevaka dia hahafaly anao, miaraka amin'izay, dia hisy toe-tsaina kokoa hankafizanao ny fotoana. Na izany aza, efa nampiasa karazana conditioners sy volo be dia be ianao ...
Ahoana ny fisafidianana mason-tava ho coronavirus?
Fantatrao ve hoe inona ny saron-tava tokony hividiananao coronavirus mas Masika fitsaboana, saron-jaza mpitsabo, saron-tava fitsaboana, saron-tava fiarovana, N95, KN95, 3M, sns. Mikasika ny anaran'ireo saron-tava, ny olona dia gaga sy very hevitra. Ny karazana saron-tava mahazatra dia azo zaraina ho sokajy 6 sokajy ...
Miarahaba ny Hebei Shouzheng Trading Co, Ltd amin'ny fomba ofisialy!
Mitady fomba fiaina ara-pahasalamana sy orinasa vokatra ara-pitsaboana ve ianao? Mitady ekipa vokatra sy famokarana matihanina ve ianao? Avy eo i Hebei Shouzheng Trading Co., Ltd. dia ho safidy tsara indrindra. Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd dia mpanamboatra fanafody nentim-paharazana sinoa amin'ny ma ...